विश्व प्रवास – AB Sansar
Category: विश्व प्रवास
एजेन्सी : गाडी अनियन्त्रीत भएर ट्रकलाई ठ’क्क’र दि’एपछि एक गाडीमा सवार ६ जनाको घटनास्थलमै मृत्यू भएको छ । छिमेकी देश भारतको राजस्थानको जयपुरस्थित रहेको चाकसुमा सो दुर्घटना भएको भारतीय सँचारमाध्यमहरुले जनाएको छ । वाईपास रोडमा ईको भ्यानको ट्रलीमा स्कोरपियो पसेपछि सो दुर्घटना भएको हो । सो दुर्घटनामा परी सोही ठाउँमै ६ जनाको मृत्यू भएको भारतीय […]
September 25, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on महिला अधिकारकर्मी कमला भासिनको निधन
महिला अधिकारकर्मी कमला भासिनको शनिबार निधन भएको छ । उनलाई केही महिनाअघि क्यान्सर रोगको पुष्टि भएको थियो । अधिकारकर्मी कविता श्रीवास्तावाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत भासिनको निधनको जानकारी दिएकी हुन् । उनले लेखेकी छन्, ‘हाम्रो प्रिय मित्र कमला भासिनको २५ सेप्टेम्बर बिहान ३ बजे निधन भएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्र र भारतमा महिला अभियानका लागि […]
September 23, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on जब ८ कक्षा मात्र पढेका श्रीमानले डिग्री पढेको श्रीमतीलाई बनाए सोच्नै न सक्ने हालत
एजेन्सी । कुनै घटना यस्ता हुन्छन् कुनैपनि मानिसलाई सुन्ने तागतपनि नहुनसक्छ । तर हाम्रो समाज यही हो सुन्दिन भनेर हुने छैन । यस्ता व्यक्तिलाई सवक सिकाउन भएपनि यस्ता सामाग्रीहरु साझा गरेर आफ्नो विचार राख्ने गर्नुहोला । पूरा पढेर आफूलाई लागेको आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहोला । यो घटना सुन्दापनि जो कोहीको मुटु चस्किन्छ । यस्ता श्रीमान […]
September 22, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on सुनैसुनको पहाड भेटियो ! खन्दै, माटो पखाल्दै, सुन निकाल्दै
काठमाडौं। ठूलो पहाडमा सुनैसुन भरिएको छ भन्ने खबर फैलियो भने के होला ? सुनजस्तो बहुमूल्य धातु पाउन त्यहाँ मानिसहरुको भीड अवश्यक लाग्छ । यस्तै सुनैसुनले भरिएको पहाड भेटिएपछि सुन खन्नको लागि स्थानीयको भीड लागेको भिडियो पछिल्लो समय भाइरल भइरहेको छ । पत्रकार अहमद अलगोहबरीले ट्वीटरमा सार्वजनिक गरेको यो भिडियो अफ्रिकी देश कंगोको भएको बताएका छन् […]
September 22, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on यो हो संसारकै लामो कान भएको कुकुर, गिनिज बुकमा लेखायो नाम (भिडियो सहित)
काठमाडौं । तीन वर्षको एक अमेरिकी कुकुरले गिनिज बुकमा नाम लेखाएको छ । लु नामको उक्त पोथी कुकुरले संसारकै सबैभन्दा लामो कान भएको कुकुरको रुपमा विश्व कीर्तिमान कायम गरेको हो । उक्त कुकुरका कानका लोती यति लामा छन् कि झ्वाट्ट हेर्दा लाम्काने बाख्राका जस्ता देखिन्छन् । कानका लोतीको लम्बाई १३.३८ इन्च छ । पेइज ओल्सेन […]
September 21, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on मराठी नायिका ईश्वरीको कार दुर्घटनामा निधन
भारतको पुणेमा बस्ने मराठी नायिका ईश्वरी देशपाण्डे र उनका साथी शुभम डेगेको गोवामा गहिरो पानीमा डुबेका कारण निधन भएको छ । प्रहरीले दुबैको शव सोमबार उत्तरी गोवाको अरपोरा इलाकामा गहिरो पानीमा डुबेको कारभित्र भेटेको थियो । ईश्वरीको कपहिलो मराठी फिल्म रिलिज हुने तयारीमा थियो । २५ वर्षीय नायिका तथा उनका २८ वर्षीय साथी शुभम डेगेको […]
दुर्घटनाग्रस्त सेनाको हेलिकोप्टरका दुबै पाइलटको निधन
September 21, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on दुर्घटनाग्रस्त सेनाको हेलिकोप्टरका दुबै पाइलटको निधन
भारतको जम्मूस्थित ऊधमपुर जिल्लामा मंगलबार बिहान हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको छ । यसमा पाइलट र को–पाइलट गरी दुईजना सवार थिए । दुर्घटना हुँदा स्थानीयले जिउँदै उद्धार गरेका यी दुईको निधन भएको छ । यी दुईलाई हेलिकोप्टरबाट निकालेर अस्पताल पुर्याइएको थियो । तर अस्पताल पुर्याए लगत्तै दुबैलाई मृत घोषित गरियो । पहाडी ऊधमपुर जिल्लाको माथिल्लो भाग शिव […]
September 21, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on यस्तो सु -साईड नोट लेखेर जब यी युवकले आफ्नै ११ दिनको सुत्केरी श्रीमतीलाई सिध्याए र त्यसपछि ……..
काठमाडौँ । भारतीय संस्कृति मा विवाह एक धेरै पवित्र सम्बन्ध मानिन्छ। जब एक केटा र एक केटी बिहे गर्छन्, उनीहरु अर्को सात जीवन संगै बाच्ने संगै मर्ने कसम लिएका थिए। तर यस्तै एउटा घटना उत्तर प्रदेशको सहारनपुरबाट प्रकाशमा घटेको छ जहाँ विवाह गर्दा सात जन्म संगै जिउने कसम खाएका जोडी सात बर्ष सम्म पनि टिक्न […]
September 18, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on नेपाली चेली बर्षाले जापानमा ज’न्माईन एकैपटक तीन सन्तान, त्यो पनि सात महिनामै
जापान ।‘छोरा भाग्यले हुन्छ भने छोरी सौभाग्यले हुन्छ । छोरा र छोरी दुबै दिन सफल भएकोमा बधाई सहित स्वा’स्थ्यलाभको कामना ।’ यि शब्दहरु हुन् बालकृष्ण खनालका । जो एकैपटक तीन सन्तानका पिता बनेका छन् । त्यो पनि दुई छोरा र एक छोरीको ।संभवत जापानमा पहिलो पटक नेपाली महिलाबाट ७ महिना पनि नपुगेको ग’र्भबाट दुई छोरा […]
September 16, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on ९ महिनाकी गर्भवती भनिएकी महिलाको पेटमा कुकुर बच्चा भेटेपछि डाक्टर समेत चकित
काठमाडौं। विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठा घटनाहरु घटिरहेका हुन्छन् कहिलेकाही मानव श’रीरसँग स’म्बन्धित यस्ता घटनाहरु बाहिर आउँछन्, जसलाई देखेर चिकित्सा विज्ञान र डाक्टरहरु पनि छक्क पर्छन् ।त्यस्तै एउटा घटना बेलायतबाट बाहिर आएको छ। त्यहाँ एक महिलालाई देख्दा लाग्छ कि उनी नौ महिनाकी ग ‘र्भ’ वती हुन्। तर जब डाक्टरहरुले उनको अ ‘परेशन गरे, एक […]